ပြဿနာများကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခြင်းကို ဖော်ပြသော ဓလေ့သုံးစကားများ - Myanmar Network
ပြဿနာများကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခြင်းကို ဖော်ပြသော ဓလေ့သုံးစကားများ
Posted by Soe Soe Win on October 16, 2015 at 17:17 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
ဒီနေ့ဆောင်းပါးမှာတော့ ပြဿနာများနှင့်ခက်ခဲသော အခြေအနေများကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းပုံဖြေရှင်းနည်း(သို့) မဖြေရှင်းနိုင်ခြင်း တို့ကိုဖော်ပြသော ဓလေ့သုံးစကားများကို လေ့လာမှာဖြစ်ပါသည်။
အကောင်းဘက်အမြင်ဖြင့် စကြရအောင် အကယ်၍ သင်သည် ခက်ခဲသောအခြေအနေတစ်ခုထဲမှာ ကျရောက်နေပြီး ဟန်မပျက် နေနိုင်ပါက take it all in your stride (UK) သို့မဟုတ် take it in stride (US) ဟုပြောပါသည်။ အဓိပ္ပါယ်ကတော့ ဒီအခြေအနေကြောင့် သင်သည်စိတ်မကောင်းဖြစ်ခြင်း(သို့) စိတ်ပူပန်ခြင်းမရှိပါဟု ဆိုလိုပါသည်။
e.g. Sarah often has problems with the staff but she takes it all in her stride. (ဆယ်ရာက ၀န်ထမ်းများနဲ့ မကြာခဏပြဿနာရှိပေမဲ့ သူမကတော့ ဟန်မပျက်ပါ။)
တစ်စုံတစ်ယောက်သည် ခက်ခဲသော အချိန်အတွင်း ထိခိုက်နစ်နာခြင်းမရှိခဲ့ပါက weathers the storm (သို့) rides the storm ဟူသောအသုံးအနှုန်းကို အသုံးပြုပါသည်။ ၎င်းအသုံးအနှုန်းကို အခက်အခဲတွေကြားက ဂုဏ်သိက္ခာမပျက်ခဲ့သောသူများအတွက် အသုံးပြုပါသည်။
e.g. Forawhile, the scandal threatened to destroy the president, but somehow he weathered the storm. (တစ်ခဏတော့ မကောင်းသတင်းတွေက သမ္မတကြီးကို ပျက်စီးစေမဲ့အလားအလာရှိခဲ့ပေမဲ့ သူက တစ်နည်းနည်းနဲ့ အန္တရာယ်ကို ကျော်လွှားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။)
ခက်ခဲသော အခြေအနေ(သို့) လုပ်ငန်းတာဝန်တစ်ခုခုကို ဖြေရှင်းရန်စတင် နိုင်ခဲ့ပြီဆို ပါက get come to grips with ဟု အသုံးပြုပါ သည်။
e.g. This isaproblem that the government really needs to get to grips with. (ဒီပြဿနာကတော့ အစိုးရအနေဖြင့် တကယ့်ကို စတင်ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ လိုအပ်နေပြီ။)
လူအများစုသည် လူတွေ့မေးမြန်းခြင်းများနှင့် စာမေးပွဲများကို ခက်ခဲသော အခြေအနေများဖြစ်သည်ဟု မှတ်ယူထား ကြပါသည်။ ဤကဲ့သို့သော အခြေအနေမျိုးကို လွယ်ကူစွာဖြင့် ကျော်လွှားနိုင်သူကို ၄င်းအခြေအနေကို ကျော်လွှား ဖြတ်သန်းနိုင်သည်။ Sail through ဟူ၍ အသုံးပြုပါသည်။
e.g. She’s very impressive – I’m sure she’ll sail through the interview. (သူက အရမ်းကို အထင်ကြီးစရာကောင်းတာပဲ။ လူတွေ့မေးမြန်းခြင်းကို သူ ကျော်လွှားနိုင်မှာ သေချာပါတယ်။)
တချို့သော ဓလေ့သုံးစကားတွေက တစ်စုံတစ်ယောက်သောသူသည် ပြဿနာတစ်ရပ်ရပ်ကို ဖြေရှင်းနိုင်ခြင်း (သို့) မဖြေရှင်းနိုင်ခြင်းထက် ၄င်းပြဿနာပေါ်၌ ထားရှိသော ထိုသူ၏ သဘောထားကို ဖော်ပြပါသည်။ Grit your teeth ဟု ပြောလျှင် ခက်ခဲသော အခြေအနေတစ်ရပ်ရပ်တွင် စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်မှုရှိခြင်းကို ဖော်ပြပါသည်။ To grit your teeth ၏ တိုက်ရိုက်အဓိပ္ပာယ်ကတော့ အပေါ်သွားနဲ့ အောက်သွားတို့ကို ဖိ၍ အံကြိတ်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ များသောအားဖြင့် ဒေါသထွက်သည့်အခါ၌ ဖြစ်ပါသည်။
e.g. The next few weeks will be tough but he’ll just have to grit his teeth and get on with it. (လာမဲ့ ရက်သတ္တပတ်တွေက ခက်ခဲမှာဖြစ်ပေမဲ့ သူ့အနေနဲ့ အံကြိတ်ပြီး ဆက်လုပ်ရမှာပဲ။)
ပြောင်းလဲ၍ မရမှန်းသိနေသော ခက်ခဲသည့် အခြေအနေတစ်ရပ်လက်ခံသော သူကို grin and bear it (ကြိတ်မှတ်ခံသည်) ဟု ပြောပါသည်။
e.g. I don’t want to do it but I don’t have much choice so I guess I’ll just have to grin and bear it. (ကျွန်တော် မလုပ်ချင်ပါဘူး၊ ဒါပေမဲ့ရွေးချယ်စရာလည်း သိပ်မရှိဘူးလေ။ ဒါ့ကြောင့် အံကြိတ်ပြီး ခံရမယ်လို့ထင်တယ်။)
အမှန်တကယ်ကတော့ အခြေအနေတော်တော်များများမှာ ကောင်းသော ရှုထောင့်နဲ့ မကောင်းသော ရှုထောင့် နှစ်မျိုးစလုံးရှိပါသည်။ အခြေအနေတစ်ရပ်ရပ်၏ မကောင်းသော (သို့) မနှစ်မြို့စရာကောင်းသော အပိုင်းနှင့်အတူ ကောင်းသော အပိုင်းတွေကိုပါ လက်ခံရန်အတွက် take the rough with the smoth (ဒေါင်ကျကျပြားကျကျနေသည်) ဟူသော အသုံးအနှုန်းကို အသုံးပြုပါသည်။
e.g. No long-term relationship is perfect, and to some extent, you have to take the rough with the smooth. (ဘယ်ရေရှည်ဆက်ဆံရေးမှ ပြီးပြည့်စုံတယ်လို့ မဆိုနိုင်ပါ။ အတိုင်းအတာ တစ်ခုအထိတော့ ဒေါင်ကျကျပြားကျကျနေရမှာပဲ။)
နောက်ဆုံးအနေဖြင့် မိမိချစ်ခင်မြတ်နိုးသူတစ်ယောက်ကို ဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့ အခြေအနေထက် ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းရန် ပိုခက်ခဲသော အခြေအနေသိပ်မရှိပါ။ ထိုကဲ့သို့သော ၀မ်းနည်းဖွယ်ရာကောင်းသော အခြေအနေကို တဖြည်းဖြည်းနဲ့ စိတ်ကို ဖြေ၍ လက်ခံသွားသည့် ဖြစ်စဉ်ကို Come to terms with (လက်ခံပြီး ရင်ဆိုင်နိုင်ပါပြီ) ဟု ပြောပါသည်။
e.g. His wife died two years ago and he’s still coming to terms with it. (သူ့ဇနီးက လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်နှစ်က ဆုံးသွားပြီး သူကတော့ အခုအထိ လက်ခံနိုင်အောင် စိတ်ကို ဖြေနေတုန်းပဲ။)
Dictionaryblog.cambridge.org မှ Kate Woodford​ ၏ Take the rough with the smooth (Idioms to describe dealing with problems) ကို ကိုးကားဘာသာပြန်ဆိုထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
Permalink Reply by lynn on October 19, 2015 at 11:09
myanmar network ကအများကြီးပြည့်ဝစေပါတယ်
Permalink Reply by Missy Candy on October 19, 2015 at 16:54
Permalink Reply by Aong Rine Sone on October 19, 2015 at 20:28
I´m so glad to read this article. It gives
me many knowledge. Thanks!
Permalink Reply by Aung Win Naing on October 20, 2015 at 10:00
Permalink Reply by Soe Hlaing on October 22, 2015 at 11:13
Permalink Reply by nyeinchanaung on October 22, 2015 at 14:30
Thank you so much for your sharing knowledge.